Ukubaluleka kweNqakraza i-Whitepaper | Martech Zone
NgoMvulo, Novemba 26, 2012 NgoMvulo, Juni 8, 2015 Nditsho eBoriboune
UDelivra, umxhasi wethu email marketing umxhasi, wenze iphepha elimhlophe elibonisa ukubaluleka konqakrazo njengoko inokuba ngumahluko phakathi kokwenza intengiso.
Ukubaluleka kokuCofa I-whitepaper ixoxa ngesizathu esingasemva konqakrazo ngalunye, amaqhinga okuphucula amaxabiso okucofa, kunye namava obomi bokwenyani ukuveza indlela ukuqonda ukubaluleka konqakrazo oluya kuyinceda ngayo imizamo yentengiso ye-imeyile yenkampani yakho.
Ukonyusa amaxabiso okucofa kwintengiso yakho ye-imeyile sisiphumo seendlela ezahlukeneyo zokuthengisa nge-imeyile. Kuya kufuneka ubazi abaphulaphuli bakho, ubanike into efanele unqakrazo, kwaye wenze i-imeyile ekhutshelweyo kunye neyokulandelelana ukufumana indibaniselwano esebenza ngokukuko kumbutho wakho.
Khuphela i-whitepaper ngolwazi oluthe kratya malunga nendlela yokuphucula amaxabiso okucofa kwi-imeyile yakho!
tags: cofa aphadelivraemail MarketingUkubaluleka konqakrazoUvimbaWhitepaper